amaqebengwana omtshato amangalisayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iikeyiki zomtshato ezimangalisayo nezinobuchule
Sisebenzise imitshato ukuba yenziwe ngokusesikweni, mihle kwaye masijongane nayo, ihlala ikruqula. Kodwa le ndlela yesiko iya isiba ngokunyamalala, ngakumbi emva kweminyhadala, apho imibhiyozo iye isiba mncinanana kwaye inye indlela. Kuzo zonke ezi zindululo zintsha, i ubuchule inokwenza okuninzi nayo. Sele siyibonile kwelinye lamanqaku ethu angaphambili ngezona zimemo zomtshato zibalulekileyo kumnatha kwaye namhlanje siza kuyenza sinike ingqalelo amanani ikeyiki yomtshato. Abanye oonodoli abonakalisa ngokucacileyo ukulunga, ukugqibelela, ubuhle kunye nobunewunewu obabuzuzwe kudala. Kodwa kuya kwenzeka ntoni ukuba sithathe isigqibo sokubandakanya izinto ezithile okanye ukubamba okwenyani kule ndawo incinci? Kuya kwenzeka ntoni ukuba besinokusebenzisa oonodoli bethu ukwenza imifanekiso engeyiyo nengcolileyo yomtshakazi nomyeni emelweyo?
Ewe, ngezantsi uza kubona okwenzekayo: Izisombululo zeComic Kwaye baya kuzisa uncumo oluqinisekileyo kubo bonke abaya kumsitho wakho. Ezi zindululo zibandakanya zonke iintlobo zezimvo, nokuba zingahlanya kangakanani okanye zingavela ngathi: Umtshakazi uyayaphula ikeyiki aze awele kuyo, okanye aphose ikeyiki kumyeni okanye angene kuyo, umyeni uza emtshatweni wakhe utsala ukunamathela kwikhompyuter yakhe okanye ikhonsoli yevidiyo, uzenza ngathi uyabaleka okanye ujika abe ngumsundululu. Inyani yile yokuba ngezi ntlobo zeenkcukacha uziva ngathi uyaya emitshatweni okanye utshatile!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iikeyiki zomtshato ezimangalisayo nezinobuchule
Imizobo yeSurreal ibonisa ubudlelwane phakathi kwabantu nendalo nguIgor Morski
Imifanekiso eqingqiweyo entle neyintsonkothileyo yamatye aselwandle eyenziwe ngomthi